Isiselo eHolland | Ukuhamba kwe-Absolut
Sonke siyavuma ukuba ukuba sicinga ngeHolland, sicinga ngebhiya iHeineken. Ngokucacileyo ayisiyiyo kuphela into enxilileyo okanye enokusela apha. Ndiyathetha, kuninzi ngaphezu kweHeineken kwaye kuninzi ngaphezu kwebhiya ngokubanzi. Kodwa emva koko, Injani isiselo eHolland?
Siza kuthetha ngaloo nto namhlanje, malunga nezona ziselo zixhaphakileyo neziqhelekileyo eHolland, ukuba sibe noluhlu lwezinto esinokuzama ngazo xa sisiya apho, ukuphela kobhubhane.
1 IHolland kunye neziselo zayo zesiko
2 Ubhiya eHolland
5 Ungayichaza kanjani Jenever kumazwe ahlukeneyo neelwimi?
6 Uyabona munt
7 UKoffie Verkeerd
IHolland kunye neziselo zayo zesiko
Ngokomgaqo, kuya kufuneka uyazi loo nto ezininzi iziselo zemveli zaseDatshi ziqulathe utywala kwaye ngamanye amaxesha ayizizo zonke ezinencasa emnandi kakhulu okanye yile nto ithethwayo, intle. Malunga neminyaka yokusela esemthethweni Apha ungasela ibhiya newayini ukusuka kwi-16 kunye neziselo ezinamandla ukusukela kwiminyaka ye-18.
Ngokuphathelele kwiziselo zesiko sibala ibhiya, i-koffie verkeed, iti ye-mint entsha okanye ivesi, i-jenever liqueur kunye nezinye i-liqueurs ezidumileyo zase-Dutch, i-chocomel, i-advocaat ene-brandy, i-kopstoot, i-korenwijn ...
Ezimbini zeempawu ezithandwayo apha zezi Heineken kunye noAmstel Nangona abahlali bebabuza ngokuthetha ngokulula, "pils" okanye "biertje". Imalunga neebhiya Iileya ezimthubi kwaye zithandwa kakhulu, kodwa kuyinyani ukuba amaDatshi ayonwabele Iibhiya zesintu ezinje nge-bokbier okanye i-witbier.
Eyokuqala ibhiya ekhethekileyo eyenziweyo entwasahlobo nasekwindla enencasa emnandi nenencasa. Incasa yahlukile kuwo omabini amaxesha onyaka, kwaye inamandla kwaye yahlulwe ekwindla. Ke, ukuba uya eAmsterdam xa amagqabi esiwa ungaya kuMnyhadala weBobkier kwaye uzame.
Enye ibhiya, i-witbier beer, nayo ineziqholo kwaye imnandi, kodwa intsha. ENetherlands kuhlala kukhonzwa nge-wedge yelamuni kunye nesitya sokuyityumza emazantsi eglasi kwaye ke oko kuzise ukutsha kunye ne-asidi.
Kwakhona kukho amaxesha apho utywala bunikwa ngomxube wokhulas, 'gruit', eyayisetyenziswa kwiinkulungwane ezidlulileyo kwaye yanceda ukugcina ibhiya xa iihops zazingaziwa ukuba zikhona. Unoku-odola olu hlobo eJopen eHaarlem, umzekelo.
Inyani yile yokuba namhlanje zininzi iindawo zotywala ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zebhiya. Ungaya kwimivalo okanye undwendwele iindawo ezithile zotywala.
Kulungile, esi siselo sinegama labantwana kodwa apha wonke umntu usitya ngokulinganayo. Ngeentsuku ezibandayo kuyinto eqhelekileyo ukubuza i-chocomel, elona gama lidumileyo lokuthengisa ngale nto chocolate kwaye kuyathuthuzela.
Kukwakho noomatshini abathengisela iChocomel kwezinye iivenkile kunye neebhari, iyathengiswa kwivenkile enkulu nakwiivenkile zokutya kwaye kukho iintlobo ezahlukeneyo ezibandakanya itshokholethi emnyama, enekrimu okanye ubisi olunamasi.
Isaci sophawu "de enige échte", into efana nale Eyokuqala neyokuphela kwayo. Ewe zikho ezinye iindlela, ubisi lukaTony Chocolonely onokuthenga kulo lonke elaseNetherlands, ngakumbi kwiivenkile ezithengisa iimveliso zendalo.
IHolland inemimoya emininzi kwaye enye yezona zidumileyo eAmsterdam yeyona UWynand Fockink utywala. Obunye utywala obudumileyo ngu T Nieuwe Diep. Inyaniso yeyokuba ama-liqueurs ayathandwa eHolland ukusukela kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe, iminyaka yegolide yala mazwe, ixesha apho ngabo batyebileyo kuphela abanokufumana utywala obenziwe ngeswekile, iziqholo kunye neziqhamo.
Ngelo xesha, abantu abahluphekileyo, abantu abaqhelekileyo, babesela ibhiya okanye i-jenever kuphela, kodwa bengenako ukuthenga utywala. Ukusukela ngoko, utywala wakhonza kwiiglasi ezincinane ezimile okwe tulip Bazalisa ngomphetho, ke akukho ukugoba kwaye ulumke kakhulu. Kuyatshiwo ukuba kunikezelwa ngolu hlobo, phantse kuphuphume, kuba abathengisi baseDatshi bathi bayigcwalisile iglasi ngemali yabo, ke, ndiyacela, phezulu kuyo yonke into.
I-liqueurs zemveli zaseDatshi zenziwa ngokongeza iziqholo okanye iziqhamo, okanye zombini, kwisiselo esitshiweyo esinokuba yiVodka okanye iJenever. Iswekile yongezwa, umxube uvumelekile ukuba uhambe ngolwandle okungenani inyanga kwaye isiphumo lulwelo olumnandi olunencasa eyomeleleyo necacileyo, ene umxholo onxilisayo.
Enye yeencasa zotywala ezidumileyo 'kwi-duindoor', enencasa yeorenji ekhuliswe kwiindunduma zoLwandle lwaseMantla. Kwakhona Kukho i-liqueurs nge-cherry okanye i-lemon, Njengohlobo lwase-Italiya olaziwa njengelemoncello
Ungayichaza kanjani Jenever kumazwe ahlukeneyo neelwimi?
Ngasentla, kumsitho wokuthetha ngotywala, sithethe ngejenever, Inguqulelo yesiDatshi ye-English gin. Imbali ithi ijenever yadliwa ngamajoni amaDatshi ngexesha lemfazwe eyayiphakathi kweSpain neNgilane ngo-1630. Babecinga ukuba basela ngaphambi kwedabi kwaye babelana namahlakani abo amaNgesi.
Xa amajoni amaNgesi abuyayo kwilizwe lawo eza neresiphi "ye-Dutch Courage", njengoko yayibhaptiziwe. Khange baphumelele, incasa ayikhange ihlale injalo ekuqaleni, ke ngoko bongeze amanye amayeza kunye neziqholo ukwenza ukuba "iseleke" kwaye kulapho ke umahluko phakathi kwesiNgesi semifuno ye-herbal gin ne-Dutch jenever uvela khona.
Ujenever Yenziwe ngokudibanisa iinkozo kunye nokuyinambitha namajikijolo omjunipha, kwaye ngamanye amaxesha ezinye iintlobo ezisetyenziselwa ukwenza utywala. Njengoko izibuko laseRotterdam lalisetyenziselwa ukungenisa iinkozo kuzo zonke iindawo ezingqongileyo, indawo yaseSchiedam, umzekelo, yayinabantu abanejenever distilleries kwaye isabonakala nanamhlanje.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zejenever: i-oude kunye nejonge. Umahluko awuxoki ngexesha abashiyeke ngalo ukuba babe zi-macerate kodwa kwiresiphi yabo. I-jenever oude yenziwe ngeresiphi endala, ngelixa ijonge isitayile esitsha. Ukuba unomdla wokufunda okungakumbi ngeli bali, ungandwendwela Indlu yeeBols eAmsterdam, okanye iMyuziyam yaseJenever, eSchiedam.
Siphuma etywaleni kancinci saya iti. Oku yi iti yeminti entsha Esi sisithethe kakhulu eHolland kwaye sinxila kakhulu nakweliphi ikona leAmsterdam. Iti inikwa ikomityi yeglasi okanye imagi ende, enamanzi ashushu kunye neqaqobana lamagqabi eti.
Unokongeza ubusi kunye namacwecwe emonti kwaye lukhetho olulula ukuba awuziva ngathi yikofu okanye ufuna enye into yokwetyisa.
Ukususela iti ikofu kukho inyathelo elinye kuphela. Ukuba uyayithanda indibaniselwano ye ikofu enobisi ke le kofu yamaDatshi yeyakho. Inguqulelo yesiDatshi yeklasikhi yekofu yakudala okanye ikofu okanye ilofu okanye ikofu enobisi. Ikofu eshushu yobisi edla ngokwenziwa nge-espresso njengesiseko sobisi olunomphunga olongezwayo ukuyenza igwebu. Ukonwaba.
Igama, koffie verkeerd, lithetha ikofu engalungangaKungenxa yokuba ikofu eqhelekileyo ayinalo nethontsi lobisi. Into eqhelekileyo kuku-odola le nguqulo kusasa okanye emva kwemini, kwaye ngelixa kukho abo bayisela ikrakra, abanye bongeza ityhubhu yeswekile. Kwiikhefi okanye kwimivalo kunikwa ikuki okanye Cookie Njengokuhamba.
Sibuyela kwiziselo ezinxilisayo. Esi siselo senziwe amaqanda, iswekile kunye nebranti. Isiphumo sisiselo segolide esisebenza njenge Isiseko sokwenza ii-cocktails ezininzi kunye needyuli.
Enye yezona cocktails zaziwayo zenziwe nge-Advocaat yi-Snowball: apha isiqingatha nesiqingatha sixutywe nelemonade. Ewe kuyafana eNgilane, kodwa apha eHolland kuhlala kunikwa i-flake ye-cream cream kunye ne-cocoa powder.
Igama, u-Advocaat, lithetha igqwetha kwaye ayisihambelani. Ibali elisemva kwesiselo lixela ukuba i-advocaat okanye i-advocatenborrel yayisetyenziselwa abo kwakufuneka bathethe esidlangalaleni ngaphambi kokuthambisa umqala wabo. Ngubani othetha esidlangalaleni? Amagqwetha.
Esi siselo siyafumaneka kuzo zonke iivenkile okanye kwimivalo yotywala yaseDatshi, nkqu nakwiivenkile zokutyela okanye ikofu. Musa ukudideka nejenever. Esi siselo senziwe ngeenkozo, kodwa ngokungafaniyo nejeaniper esebenzisa amajikijolo omjunipha, la maqunube akakho. Ke, incasa yahluke kakhulu.
Ngokubanzi, korenwijn wakhonza ngokutya okuqhelekileyo kwesiDatshiUmzekelo, yena ukufukama (Isitya sentlanzi).
Inokuthelekiswa nesixhobo sokubilisa isiNgesi. Kunikwe iiglasi ezimbini, enye yebhiya kunye nejenever. Kuqala usela i-jenever, kwindawo enye, kwaye emva koko ubhiya uzolise ukutshisa okokuqala.
Kumnandi kwaye kunzulu kwaye kunesiDatshi kakhulu, ukuba ufuna ukufumana a I-100% yamava esizwe.
Ayikho enye into ngaphandle kwesiselo seorenji ivela kwimibhiyozo yesizwe, njengoSuku lweKumkani okanye imidlalo yebhola ekhatywayo okanye uSuku lweNkululeko. Yi utywala obunamandla kakhulu, I-30% yotywala, kwaye ihlala inikwa adubule.
I-oranjebitter Ikrakra kwaye yomelele, yenziwa ngebranti, orenji kunye ne-orenji. Iyafana ne-liqueur ye-orenji yakudala kodwa i-liqueur ineswekile kuyo. Kufuneka kuthiwe namhlanje uninzi lweebhotile zeOranjbitter zineswekile, ngenxa yoko ayisasebenzi soooo Ikrakra.
Nangona inegama lesiFrentshi, isiselo esiyiDatshi. Sisiselo esinxilisayo Inguqulelo yesiDatshi yeklasikhi cognac. Yayifudula ibizwa ngokuba ngumntakwabo ongumFrentshi, kodwa pha koo-60 inguqulelo yesi-Frentshi yafumana ubume bemvelaphi emva koko igama kwafuneka litshintshwe.
Isiselo esidumileyo kukusixuba neCoca-Cola, nangona singakulibali oko inotywala obuninzi, malunga neepesenti ezingama-35. Utywala obunamandla ngakumbi yiGoldstrike, enomxholo wotywala oyi-50%.
Ukuza kuthi ga ngoku, ezinye ze iziselo eHolland kodwa kunjalo kuninzi. Kuhambo lwakho oluya eNetherlands, nxiba isikhuseli sesibindi kunye…. ukonwabela!
IGastronomyUkuzonwabisaIindawo zokutyela nemivalo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Isiselo eHolland
Zeziphi ezona zinongo zisetyenziswayo eIndiya?